अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! | प्रमुख समाचार
June 18, 2021 NepstokLeaveaComment on अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी !
अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! काठमाडौं । को-रोनाले देशका सम्पुर्ण यातायात छेत्रलाई तहस नहस पारिरहेको बेलामा सरकारले दुई जनासम्म यात्रु राखेर काठमाडौ उपत्यकामा ट्याक्सी सन्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिनेमा सकरात्मक देखिएको हो ।
तर, निर्णय भने भैसकेको छैन ।यसबारे छलफल गर्न कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) लाई जिम्मा दिइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारलाई बाढीले बेहा’ल तुल्याएको छ । घरको तीन तलासम्म लेदोले डुबेको अवस्था छ भने सारा सा’मान छाडेर ज्यान जोगाउनकै लागि नजिकैको विद्यालयमा आ’श्रय लिएका स्थानीयवासीका लागि गाँस, बास र कपासको स’मस्या टड्का’रो भएको छ ।
मंगलबार इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारका करिब एकसय घर पूर्ण रुपमा डुबा’नमा परेका छन् ।
स्थानीयवासी मच्छिन्द्र श्रेष्ठ बाढीले आफ्नो परिवारको उठीबा’स नै गराएको बताउँछन् । १० जनाको परिवार रहेका श्रेष्ठले ०७४ सालमा ऋण लिएर चार तले घर बना’एका थिए । मंगलबार लेदोसहित आएको बाढीले उनको घर डु’बाएको छ ।नायिका श्वेता खड्काले मेलम्चीका बाढीपीडितलाई सह’योग गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।श्वेताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मेलम्चीका बाढीपी’डितका लागि सहयोगको अ’पिल गरेकी हुन् ।
उनले अगाडि लेखेकी छिन्, ‘काठमाडौलाई पानीको प्यास मेटा’एर आफु भने आँशुको भेलमा ‘डुबिरहेकी मेलम्चीको दुख र पिंडालाई टुलु टुलु हेरेर कहाँ बस्न सकिन्छ र ? मेलम्चीको यो द’र्दनाक अवस्थामा साथ र सहयोगको हात ब’ढाउनु अहिलेको आवस्यकता हो ।’
बनेपामा आमा-छोरा मृत भेटिए, श्रीमान अचेत !
मेलम्चीमा ७ जनाको मृत्यु पुष्टि : घरको छतमा फसेकाहरु गुहार माग्दै-सेनाको टोली उद्धारको लागि जाँदै
१२ तले भवन भ’त्किँदा ९९ जना बे’पत्ता